Dadka faransiiska oo u dareeray doorashada madaxtinimada ku celiska ah ee dalkaasi – Radio Daljir
Dadka faransiiska oo u dareeray doorashada madaxtinimada ku celiska ah ee dalkaasi
Paris, May 06 -Dadka wadanka Faransiiska ayaa maanta oo axad ah u codeynaya doorashada madaxweynenimada ee dalkaasi ee celiska ah, oo loo arko in ay markii ugu horeysay ku guuleysanayaan qolyaha hantiwadaaga ah tan iyo sanadkii 1988dii.
Wareegii kowaad ee doorashada madaxtinimada Faransiiska ayaa murashaxa shuuciga ah ee Francois Hollande ku guuleystay 28.6% halka madaxweynaah talada haya ee Nicolas Sarkozy uu helay 26.2%.
Shaqa la?aanta kor u kacaysa ee dalkaasi iyo iyo dhibaatada dhinaca lacagta Euro ayaa si weyn u hadheysay ololihii doorashada ee dalkaasi faarnsiiska.
Goobaha cod-bixinta ee doorashooyinka madaxtinimada ee dalkaasi faransiiska ee ku celiska ah ayaa la furay 8dii subaxnimo ee maanta ,iyadoo fiidkii la soo xidhayo.
tartanka maanta ee madaxtinimada dalkaasi Faransiiska ayaa loo arkaa mid aad la isugu dhowyahay,islamarkaasina tiro aad u yar lagu kala badin doono.
Asbuucii hore dood dhinaca Televisionka ah oo loo arkayey fursadii ugudameysay ee Nicolas sarkozy uu sumcaddiisa dib ugu hagaajinlahaa ayaa ku dhamaatay, iyadoo doodaasi laga adkaaday Mr Sarkozy.
Murashaxa shuuciga ee dalkaasi faransiiska ayaa dhawr jeer oo hore isu soo taagay madaxtinimada dalkaasi faransiiska, iyadoo doorashadatani loo badinayo in uu tiro aad u yar uu ku guuleysto.